मैनालीले कवितामार्फत् बसाउन चाहेको ‘प्रेमबस्ती’ | Safal Khabar
मैनालीले कवितामार्फत् बसाउन चाहेको ‘प्रेमबस्ती’
मंगलबार, १६ भदौ २०७७, ११ : ०१
भनिन्छ प्रेमका बारेमा बोल्न सजिलो मात्र छैन, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ । त्यही जोखिम मोल्न हाम्रो माझ ‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रह लिएर कवि श्वेता मैनाली आएकी छन् । चितवनमा जन्मिएकी र हाल अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पेसाले नर्स मैनाली सानैदेखि साहित्यमा रुचि राख्ने गर्थिन् । उनले प्रेममा अगाध आस्था राख्दैे ३३ वटा फुटकर कविता समेटेर ‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रह प्रकाशित गराएकी हुन् ।
प्रेम शाश्वत भाव हो । मानवले भाषाको विकास गरेदेखि प्रेमका बारेमा विविध खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएको पाइन्छ । प्रेमका विषयमा बोल्नु सजिलो मात्र छैन, जोखिमपूर्ण पनि छ । यही जोखिम मोल्न नवीनतम कविताकृति ‘प्रेमबस्ती’ लिएर कवि मैनाली आएकी हुन् ।
‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रहमा समेटिएका प्रेमका विविध भावहरू
विवेच्य कृति ‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रहको पहिलो कविता ‘आमा’बाट सुरु भएको छ भने अन्तिम ‘प्रेमबस्ती’मा पुगेर टुङ्गििएको छ । यसका विभिन्न कविताहरूमा प्रेमका विविध भावहरू समेटिएका छन् । यसका पुष्टि तलका साक्ष्यहरूले गर्छन् :
क) आमाको माया
आमा सृष्टिको अनुपम सृजना हो । त्यसो त आमाको सृजना नै प्रेम गर्नका लागि हो । कविले आमाको काखलाई प्रेमको अजस्र भण्डार ठान्दै यस्तो भनाइ राखेको पाइन्छ :
जसका काखमा पीरबाधाहरू छुमन्तर हुन्छन्
जसको वात्सल्य हेरेर मायाका परिभाषा बन्छन् ।
(आमा, पृ. ११)
ख) बाबुको माया
बालकका लागि आमाको माया मात्र सबथोक होइन । बाबुको माया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कविका दृष्टिमा बाबुको मायाले जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतलता दिने कुरा यसरी अभिव्यक्त भएको छ :
जाडोको न्याने घाम जस्तै
गर्मीको शीतल छहारी जस्तै
बा ! तिमी तिमी थियौ ।
(बाको माया, पृ. १४)
ग) देशको माया
देश भनेको आमा–बाबुभन्दा पनि ठूलो कुरा हो । जसको देश हुँदैन, उसको परिचय पनि हुँदैन । देश छाडेर परदेशमा बस्न विवशहरूले देशको मर्म राम्ररी बुझेका हुन्छन् । उनीहरूको हरेक धड्कनमा देश पाइन्छ भन्ने कुरालाई कविले यसरी वाणी दिएको पाइन्छ :
आज दैलो दैलोमा दीयो जलेको छैन
मेरो देशको हरएक टुकीमा आत्मीयता बलेको छैन ।
(देशको दीप, पृ. १६)
घ) आमा–बाबुको तुलनामा देशको माया
आमा–बाबु जहाँ हुन्छन्, बालबच्चाका लागि त्यही उसको घर हो । घर भनेको संरक्षण हो, जुन देशसँग सम्बन्धित हुन्छ । आमा र बाबुले जसरी सन्तानको सुरक्षा गर्छन्, त्यसरी नै देशले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा दिन्छ । एउटा बालकले आमा–बाबुमा देशको छवि देखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई कविले यसरी मुखरित गरेको देखिन्छ :
आमाले बाल्दै गरेको दीयो
बाले टपरीमा प्वाल पारेर ढाकिदिँदा
हावा पनि कोल्टे फेरेर भाग्थ्यो ।
ङ) अतीतप्रतिको प्रेम
समय अत्यन्त बलवान् छ । आजको दिन भोलि अतीत भइसक्छ । मान्छेले अतीतका सुन्दर कुराको स्मरण गरेर रमाउँछ । अतीतमोह भन्नु जीवनप्रतिको प्रेम हो । कविमा अतीतप्रति असीम प्रेम भेटिन्छ, जसलाई तलको साक्ष्यले पुष्टि गर्छ :
लौ आयो दशैँ आयो हालेर भाका
मस्तीमा झुम्दै गाउँला र फेरि
मानेर उस्तै रमाइलो हामी
निधार भरि त्यो रातो टीका
लाउँला र फेरि ?
त्यो प्यारो दशैँ आउला र फेरि ?
(त्यो झिल्के दशैँ आउला र फेरि, पृ. २७)
च) प्रेममा हुने विछोडको चित्रण
प्रेम भनेको पाउनु मात्र होइन, गुमाउनु पनि हो; मिलन मात्र होइन, विछोड पनि हो । हामी मिलनमा रमाउँछौँ, तर प्रेममा अधिकतम विछोड नै हुने गर्छ । कविले यस्तै विछोडका भावनालाई यसरी चित्रित गरेको पाइन्छ :
धर्को जोड्ने बहानामा
उनीहरू चर्को मात्र भए
चित्रमा न ऊ अटाएको थियो
न उनी समेटिएकी थिइन् ।
(आकार किसिमको, पृ. ३२)
ओसिला परेलीहरू पनि
बेला बेला उघ्रिएर
तिमीलाई नै खोजिरहेछन् ।
(नओभाएका आँखाहरू, पृ. ६९)
छ) प्रेमको आकर्षणको चित्रण
जसरी चुम्बकले विपरीत ध्रुवलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ, त्यसरी नै प्रेमले पनि अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ । यसरी आकर्षित गर्नु नै प्रेमको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसलाई यसरी अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ :
फुत्किन्छौँ कि कहीँ कतै भनी
एक अर्कालाई समाती रह्यौँ
हाम्रो विपरीत ध्रुवले
हामीलाई नजिक खिचिरह्यो ।
(चुम्बक जस्तै हामी, पृ. ३५)
ज) प्रेमको प्राप्तिको चित्रण
प्रेमले हरेक व्यक्तिलाई आफू धन्य भएको ठान्न लगाउँछ । आफूलाई पूर्ण ठान्ने वातावरणको सिर्जना गराउनु नै प्रेमको प्राप्ति हो । कविले पनि आफूमा त्यस्तै भावना आएको कुरालाई गीतिलयमा यसरी अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ ः
आधी आधी मिलाएर
म त साँच्चै भरि भएँ
म त रानीचरी भएँ ।
(म त रानीचरी भएँ, पृ. ३६)
तिमीले दिएका प्रीतहरूले
मेरा रातहरू जूनझैँ सुन्दर छन्
सूर्योदय र सूर्यास्त त
बहाना मात्र थियो ।
(तिमी मेरो सूर्योदय, तिमी मेरो सूर्यास्त, पृ. ७९)
झ) प्रेममा हुने सोचाइको भिन्नताको चित्रण
जसरी जीवनलाई हेर्नेहरूले आ–आफ्नै तरिकाले हेर्छन्, त्यसरी नै प्रेमलाई पनि हेर्नेहरूले आ–आफ्नै तरिकाले हेर्ने गर्छन् । व्यक्तिले अरूलाई उपहार दिँदा पनि त्यस्तै विचारले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरालाई कविले यसरी चित्रण गरेको देखिन्छ :
उपहार तिमीले पनि ल्यायौ
उपहार मैले पनि ल्याएँ
तिमीले बन्दुक बोकेर आयौ
मैले गुलाफ लिएर आएँ ।
(प्रेमदिवस, पृ. ४२)
ञ) प्रेमको निरन्तरताको चित्रण
प्रेम भनेको अविराम यात्रा हो । यसको थालनी कुनै बिन्दुबाट अवश्य हुन्छ, तर अन्त्य भने जीवनभर कतै पनि हुँदैन । प्रेममा कुनै गन्तव्य नहुने ठहर कविको रहेको छ । कवि प्रेमलाई निरन्तरको यात्रा ठान्दै यसरी अभिव्यक्त भएका छन् ।
गन्तव्यविहीन निरन्तर र अनन्त नै
अन्त्य होइन, निरन्तर नै प्रेम हो ।
(प्रेम र गन्तव्य, पृ. ४७)
ट) प्रेममा लेनदेनको चित्रण
ठान्नेहरू प्रेमजस्तो पवित्र कुरालाई पनि लेनदेनसँग तुलना गर्छन् । सामान पैँचो दिएजस्तो प्रेमलाई पनि पैँचोको रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरालाई कविले आफ्ना शब्दमा यसरी चित्रण गरेको पाइन्छ :
मेरो भन्दा तिम्रो धेरै
किन हुन्थ्यो प्रेम
जति दियो उति फिर्ता
पैँचो भो प्रेम ।
(पैँचो भो प्रेम, पृ. ४९)
प्रेम भन्ने कुरा विपरीत लिङ्गीसँग मात्र हुँदैन । देशसँग हुने प्रेम, भाषा, साहित्य र सँस्कृतिसँग हुने प्रेम त्यसका उदाहरण हुन् । कविलाई काव्यसँग अपार प्रेम छ, जसलाई तलको साक्ष्यले पुष्टि गर्छ :
दिनहरू जस्तो जस्तो रह्यो
म तिमीलाई त्यस्तै देख्छु
त्यसैले त झरीमा कविता होइन
म कवितामा झरी लेख्छु ।
(झरी, पृ. ६५)
शब्दमा माया अनूदित भए
उनेर सबै शब्दलाई
यौटा माला जोरिदिन्थेँ
महाकाव्य कोरिदिन्थेँ ।
(शब्दमा माया सीमित भए, पृ. ८१)
ड) प्रेमको दर्शन
प्रेम अपार हो, यसलाई विविध कोणबाट वर्णन गर्न सकिन्छ । प्रेम छ, संसार छ, प्रेम टुटेपछि केही बाँकी रहँदैन । मनबाट नातासम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालत जानु नपर्ने भावलाई दार्शनिक पाराले कविले यसरी व्यक्त गरेको पाइन्छ :
मनको नाताको सम्बन्ध–विच्छेद गर्न
अदालत पुग्नु पर्दैन रहेछ
बस् मनैमा सही ठोकिदिए पुग्ने रहेछ ।
(फरक कोण, पृ. ८८)
ढ) प्रेमबस्तीको कल्पना
संसारका हरेक व्यक्ति आफ्नो बस्तीलाई प्रेमबस्ती भएको हेर्न चाहन्छ । कविको पनि मनभित्र त्यस्तै प्रेमबस्तीले बास गरेको छ, जसलाई शब्दमार्फत् यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ :
खुसी यहीँ छ, पीडा यहीँ छ
प्रेम यहीँ छ, धोका यहीँ छ
ईश्वरका रूपमा राम यहीँ छ
र, आत्मा बेच्ने हराम यहीँ छ
यहीँ छन् प्रेमले ओतप्रोत प्रेमिल मनहरू ।
(प्रेमबस्ती, पृ. ९२)
‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रह प्रेमको काव्यात्मक दस्तावेज हो । यसमा जम्मा ३३ वटा फुटकर कविताहरूमार्फत् प्रेमका विविध भावहरू तरङ्गित भएका छन् । त्यति मात्र नभएर प्रेममय तवरबाट संस्कृतिप्रति विद्रोह पनि गरिएको छ । जसलाई तलको साक्ष्यमा देख्न पाइन्छ :
ए रातो तीज !
तिमी किन कुनै वर्ष सफेद हुन सकेनौ ?
किन कुनै वर्ष समेट्न सकेनौ ?
(सफेद तीज, पृ. २९)
समग्रमा ‘प्रेमबस्ती’ कवितासङ्ग्रह प्रेमको मसीले प्रेमकै कागजमा कोरिएको प्रेमिल कविताहरूको सञ्चयन हो । यसमा प्रेमलाई सरल ढङ्गले उतार्ने काम भएको छ । पहिलो कृति भएकाले वर्णनमा सरलता यसको सीमा भएर पनि यही नै यसको शक्ति पनि बनेको छ । अन्त्यमा यसै कृतिबाट एउटा उद्धरण प्रस्तुत गर्दै कलम रोक्न चाहन्छु :
यो बिहान यस्तो लाग्छ
झझल्का तिम्रा मसम्म बगिरहेछन्
तिम्रा सभ्झनाहरू पानी बनेर
मेरै कवितालाई भिजाइरहेछन् ।
(मेरो बिहानी अनि तिमी, पृ. ५०)
(समीक्षक वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका उपप्राध्यापक हुन् ।)